Fomba fiaina any Nouvelle-Zélande ho an'ireo mpitsidika NZeTA
Fahatakarana ny fomba fiainan'i Nouvelle Zélande ho an'ireo mpitsidika ny New Zealand Eta Visa (NZeTA)
Raha te hizaha an'i Nouvelle-Zélande ianao mandritra ny roa taona dia tsy New Zealand Eta (NZeTA) dia mety ho mety aminao ny Visa fialantsasatra miasa.
New Zealand dia mifandray fifandraisana amin'ny fandaminana mifamaly amin'ny firenena maro, ahafahanao miasa sy manadihady momba ity firenentsika miavaka ity.
Tanora maro tsy tapaka no mangataka visa any New Zealand miasa, ary mandalo herintaona na roa miasa any Nouvelle Zélande.
Inona ny fepetra sy ny fepetra ilaina amin'ny visa fialantsasatra miasa toy izany?
Ny visa miasa dia azon'ny tanora idirana, matetika amin'ny taona 18 ka hatramin'ny 30, ho an'ny 18 ka hatramin'ny 35 amin'ny firenena vitsivitsy voafidy. Avelany handeha sy hiasa any New Zealand ianao mandritra ny herintaona, na 23 volana raha tsy avy any Angletera na Kanada ianao. Raha toa ka mangataka visa 23 volana ianao dia tokony hanome mari-pahaizana momba ny fitsaboana ankapobeny.
Ny fepetra fanampiny dia:
manana vola ampy handoavana tapakila fahatongavana, ary
ho avy amin'ny ankamaroan'ny fotoana, miaraka amin'ny tanjona ho mpanampy.
Raha manantena ny hiasa ianao na hijanona ela kokoa, na ho tonga any Nouvelle-Zélande noho ny antony hafa fa tsy fotoana fiasana, dia mety hisy karazana visa azonao heverina.
Rehefa nifandray tamin'ny visa ho an'ny vanim-potoana iasanao ianao dia fotoana mety indrindra hanombohana handamina ny fitsangatsangananao. Hadihadio ireo tranokalan'ny governemanta roa sarobidy ireo handinihana ny fitsidihana, fiasana ary fiainana any New Zealand.
Tsy dia mitondra fiara intsony any Nouvelle Zélande
Ny vondrom-piarahamonina sy ny tanàna kely feno tanàna, tsy dia feno olona dia manamora kokoa ny fandehanana sy fiasana. Manantena ny handao ny trano amin'ny ora tsara kokoa noho ny salan'isa, ary hikasika ny fotony miaraka amin'ny fotoana hahavitana zavatra amin'ny alina.
Auckland no tranga manokana. Toy ny tanàna an-tapitrisany na mihoatra, dia misy fanakanana ny fifamoivoizana an-tampon'isa.
Fanapahan-kevitra amin'ny fomba fiainana
Nouvelle-Zélande dia tsy manana fiparitahan'ny trano fandraisam-bahiny matevina na tsanganana misy tranobe avo kokoa hitanao any an-kafa. Misy ny toerana hivezivezena sy karazan-dàlana safidy safidy.
Azonao atao ny misafidy trano avo be an-tanàn-dehibe na tranobe ambanivohitra misy toerana ho an'ny ankizy sy fanamboarana legioma (heverinay ho 'faritra ampahefatry ny lanitra an-tany'). Avy eo, afaka mandeha lavitra kokoa any an-trano ianao ary miaina eo amoron'ny ranomasina na manakaiky ny natiora eny an-kalamanjana, angamba miaraka amin'ny tanimboly sy zavaboary (antsointsika hoe fomba fiaina ireo).
Fantaro fotsiny fa ny trano any Nouvelle Zélande dia mety mila soritrasa ampiasana anao. Mpitsidika marobe no mahita ny tsy fisian'ny fisaronana roa sosona, ny fiakaran'ny hafanana na ny fampangatsiahana - na mampahafantatra ny tenany manokana
Mihamahazo vahana ny fiainana
Ny fombantsika mahafinaritra, tambajotra tsy feno olona, ​​tahan'ny asa ratsy maivana sy tontolo iainana mpandala ny nentin-drazana dia midika ho fanahiana matetika eto amin'ny fiainana.
Ny ankamaroan'ny transients dia mahita ny marina fa mihoatra ny faniriana amin'ny fomba toy izany. Ohatra, araka ny asehon'ny topimaso an'ny Expat Explorer an'ny HSBC 2015, dimy ambin'ny fitopolo isan-jaton'ny mpitsidika any Nouvelle Zélande no milaza fa ny fahafaham-pon'ny tenany manokana dia ambony noho ny ao an-trano. "Mitrandraka izany ireo mpitsoa-ponenana mba hijanona araka izay tratra ary 71% no nonina ela tany Nouvelle-Zélande."
Hitan'ny Nouvelle-Zélande ny zavatra tsara kokoa mandrakizay. Ohatra, CNN dia manome isa an'i Wellington ho iray amin'ireo vondrom-piarahamonina espresso valo miavaka manerantany.
Fanadihadiana maro be no mampiseho ny fahaiza-mandanjalanja eo amin'ny asa sy ny fiainana any Nouvelle-Zélande.
Ny fandinihana nataon'ny Expat Explorer an'ny HSBC 2017 dia nametraka antsika faha-6 teto ambonin'ny planeta ho an'ny fitoviana eo amin'ny fiainana amin'ny asa (ary voalohany ho an'ny 'fahafaham-po manokana'). Amin'ny ankapobeny dia nandatsa-bato an'i Nouvelle-Zélande izy ireo ny toerana fahatelo malaza indrindra eto an-tany ho an'ireo mpivahiny monina sy miasa.
Ny fanadihadiana farany (2017) nataon'ny manam-pahaizana momba ny HR manerantany dia nametraka an'i Auckland ho tanàna tsara indrindra fahatelo eto an-tany ho an'ny 'Nature of Living', taorian'ny Vienna sy Zurich, ary voalohany tany Azia Pasifika sy Australasia. Nahazo isa tsara koa i Wellington, tamin'ny faha-XNUMX.
Ny Firenena Mikambana dia mametraka an'i Nouvelle Zélande firenena iraika ambin'ny folo amin'ireo firenena 187 amin'ny Index Human Development Index 2017.
Iray amin'ireo topimaso lehibe indrindra eran'izao tontolo izao dia nandatsa-bato an'i Nouvelle Zélande ny toerana fahenina tsara indrindra eto an-tany ho an'ireo aotirisy. Ny rakitra Expat Explorer an'ny HSBC dia manome taratra ny fanombanana ireo mpitsangatsangana 9,300 eo ho eo any amin'ny firenena 100 mahery.
Makà asa. Inona koa, fisiana tena izy.
Zava-dehibe amintsika ny fiakarana sy ny fivoarana. Firenena efa lehibe sy mifamatotra izahay ary manana vintana marobe hampandroso ny asanao.
Na izany na tsy izany, manaiky ny fiainana ny olona any Nouvelle-Zélande. Izy io dia mifamatotra amin'ny fanitsiana ny ezaka mendrika andro iray miaraka amin'ny fotoana ho an'ny fianakaviana sy ny mpiara-miombon'antoka ankoatry ny fialamboly sy toerana malalaka natolotry ny firenentsika.
Ho an'ny rakitsoratra, New Zealand dia noheverina ho faha-6 teto ambonin'ny planeta noho ny fandanjana ny fiainana amin'ny asa amin'ny fanadihadiana Expat Explorer an'ny HSBC 2017. Mety mila mahita an'i Nouvelle-Zélande amin'ny Visa na New Zealand Eta (NZeTA) ianao kanefa fantaro fa misy safidy hafa azonao atao.
Na dia mihoampampana amin'ny toerana marobe aza ny fananana fahatsapana fandriam-pahalemana, iray amin'ireo izay fantatry ny New Zealanders.
Fahatsapana fitoniana tena izy
Voamarina amin'ny topy maso manerana an'izao tontolo izao izahay ho toy ny firenena milamina sy tsy milamina indrindra eto an-tany.
Ny Global Peace Index 2017, izay mijery firenena 162 amin'ny loza mety hitranga amin'ny fanaovana habibiana ataon'ny isam-batan'olona, ​​dia manisa an'i Nouvelle-Zélande ho firenena faharoa azo antoka indrindra eran-tany taorian'ny Islandy.
Ny Index Transpérence Perpuption Internationale an'ny Transparency International dia mametraka antsika ho firenena ambany indrindra eto an-tany, mitovy amin'i Danemark.
Tsy manana fiainana voajanahary tena mampidi-doza izahay mba hampiasanao saina.
Ny momba ny zava-dehibe indrindra mety hampidi-doza avy amin'ny zavaboary dia ny fiaranao. Kea, zavamaniry volom-borona toy ny boloky hita amin'ny haavon'ny avo kokoa any South Island, etsy sy eroa dia mampiseho ny tian'ny elastika amin'ny fitaratra, fidirana ary fitaratra.
Malalaka ny ankamaroan'ny olona any Nouvelle-Zélande ary manaiky ny olona tokony havela hanohy ny lalam-piainan'izy ireo.
Misy ny lalàna mifehy ny alahelon'ny olona manoloana ny fahafahan'ny olon-drehetra maneho ny heviny sy ny kabary, ary manana fiaran'ny polisy azo atokisana sy azo atokisana azonao aleha izay manazava isa mitovy be ihany ny zava-drehetra mitovy.
Tsy mampahory anao ny polisy eto. Manana torolàlana mahitsy tokony harahin'izy ireo izy ireo ary tsy afaka hanao zavatra amim-pahendrena. Rehefa tsy isalasalana dia tsy mitondra basy tsirairay izy ireo.
Satria somary milamina sy milamina io, ianao sy ny fianakavianao dia tsy mila misalasala mivoaka ary mankasitraka izay rehetra entin'i Nouvelle Zélande eo ambony latabatra.
Azonao atao ny manantena ny handeha na bisikileta amin'ireo boulevards, hilalao amin'ny faritra filalaovana, hahazo fiara misokatra ary amin'ny ankapobeny dia ataovy ireo zavatra ilainao hitantanana tsy hatahorana.
Azonao atao ny mankasitraka malalaka ny toerana malalaka any Nouvelle-Zélande, mahita ny morontsiraka, manana fotoana mahafinaritra amin'ny kianja filalaovana sy valan-javaboary, fitsangatsanganana, manadihady ny fefy, miakatra tendrombohitra ary mivezivezy araka izay ilainao